Hagaajinta Waxtarka Soo Jeedinta iibka | Martech Zone
Hagaajinta Waxtarka Soo-jeedinta Iibinta
Isniin, Maarso 31, 2014 Monday, June 8, 2015 Jenn Lisak Golding
Adduunyada oo ay jiraan xulashooyin badan oo kala duwan iyo dhammaan macluumaadka aan heli karno oo leh raadinta degdegga ah iyo guji, wareegga iibku wuu sii dheeraaday tobankii sano ee la soo dhaafay. Dhab ahaantii, ka celceliska wareegga iibku waa 22% ka dheer yahay sidii uu ahaa shan sano ka hor. Maxaa bixiya
Our otomaatiga soo jeedinta iibka kafaalaqaadka, TinderBox, ayaa dhab ahaantii daraasad la sameeyay Miller Heiman iyo Ururka Maareynta Iibka si loo ogaado caqabadaha ururada iibka ay la kulmaan soo jeedinta iibka iyo wareegyada iibkooda. Mid ka mid ah yoolalka ugu muhiimsan ee daraasadda ayaa ahayd in la helo habab lagu soo koobi karo hannaanka soo-jeedinta iibka wax ku oolka ah iyadoo la fiirinayo ururada iibka ee guuleysta. Waxayna u daabaceen daraasadda raalli ahaanshahaaga akhriska:
Soo dejiso Waxtarka Soo-jeedinta Iibinta ee Daraasaadka Ururada Iibinta B2B
Dheef-shiidka degdegga ah, waxaan la shaqeynay kooxda ka socota TinderBox si loo abuuro sawir-wadaag la wadaaga dhammaan natiijooyinka muhiimka ah ee daraasadda. U fiirso oo wax ka baro qaar ka mid ah siyaabaha muhiimka ah ee loo abuuri karo habka soo-jeedinta iibka wax ku oolka ah.
Tags: infographicMiller heimanwareegga iibkaururka maaraynta iibkasoo-jeedinta iibka waxtarkasantuuqa
Warbaahinta Bulshadu waa Macdanta Dahabka ee Suuqgeynta Caymiska